Izimoto Zesitimela ZaseThai zeziguli ze-COVID-19 ezingenawo ama-AC noma izindlu zangasese
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Health News » Izimoto Zesitimela ZaseThai zeziguli ze-COVID-19 ezingenawo ama-AC noma izindlu zangasese
Health News • Izindaba • Ukwakha kabusha • I-Thailand Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Izindaba Ezihlukahlukene
Izimoto Zesitimela ZaseThai zeziguli ze-COVID-19
Azikho izinto zokuphefumula futhi azikho izindlu zangasese… okwamanje. Yilokho iziguli ze-COVID-19 ezingabonakali ezibhekene nazo lapho zingeniswa emawodini azo okuhlukaniswa - izimoto zezitimela eziguquliwe.
Iziguli zaseThailand ze-COVID-19 eBangkok ezilindele ukuhanjiswa esikhungweni sokwelashwa zizohlukaniswa ezimotweni zezitimela eziguquliwe.
Lesi sikhungo esihlukanisayo siyakhiwa edepho yesitimela sikagesi iBang Sue Grand Station.
Umsebenzi uyaqhubeka nokufaka amanetha okuvimba omiyane nezindlu zangasese zangaphandle kanye nokuxhuma izinqola kugesi namanzi.
I-Bangkok Metropolitan Administration (i-BMA) kanye ne-State Railway of Thailand (i-SRT) manje basebenzela ukuvula isikhungo sokuhlukaniswa kweziguli ze-COVID-19 edepho yesitimela sikagesi iBang Sue Grand Station.
UMbusi waseThailand uPol. UGeneral Aswin Kwanmuang uthe lesi sikhungo sizosebenza njengesikhungo sangaphambi kokungeniswa kweziguli ze-COVID-19 ze-asymptomatic e-Bangkok ezilindele ukuhanjiswa esikhungweni sokwelashwa.
Kunezinqola zokulala ezingena-15 ezingenawo umoya manje eziguqulwa zibe wards wedwa. Ikalishi ngalinye lingahlala ezigulini ezifika ku-16, kusetshenziswa kuphela umbhede ophansi. Kwenziwa imisebenzi yokufaka izikrini zomiyane emafasiteleni, ukuxhuma amakalishi kugridi yamandla nohlelo lwamanzi, kanye nokufaka izindlu zangasese zangaphandle.
Uthe le phrojekthi iqalwe nguNgqongqoshe Wezokuthutha uSaksayam Chidchob, oyalele iState Railway yaseThailand kanye neBangkok Metropolitan Administration ukuthi basungule indawo entsha yokuhlukaniswa kweziguli ndawonye.